Faayiloota Barruu Alaaguu fi Alerguu
Faayilootni gatiiwwan qoodduun addan bahan(CSV)faayiloota barruu kan qabiyyeewwan man'ee wardii baaqqee qabatu dha. Qoodduuwwan, buufatoonni xiqqaa, ykn arfiileen biroo akka daangessaa dirree jidduu man'eeleetti fayyaduu danda'u. Diraawwan barruu mallattoo waraabbii keessa taa'u, lakkoofsonni mallattoo waraabbii malee barreeffamu.
Faayilii CSV Alaaguuf
Dirree Gosa Faayilii keessatti, dhangii "CSV Barruu" filadhu. Faayilii filadhuutii Bani cuqaasi. Yemmuu faayiliin fufaa .csv qabu, gosti faayilii ufmaan beekama.
Qaaqa Alaaga Barruu agarta. Tole cuqaasi.
Foormulaawwanii fi Gatiiwwan akka Faayiloota CSV tti Alerguuf
Wardii akka faayilii csv tti barreeffamuuf jedhu cuqaasi.
Yoo foormulaawwan akka foormulaawwaniitti alerguu barbaadde,gita =IDA'A(A1:B5) tiin, akka armaan gadiitti itti fufi:
Agarsiisi jalatti, sanduuqa filannoo Foormulaawwan mallattoo itti godhi.TOLE cuqaasi.
Yoo foormulaawwan osoo hin ta'in bu'aalee shallaggii alerguu barbaadde, Foormulaawwan mallattoo itti hin godhin.
Faayilii - Akkasitti olkaa'ifili.Qaaqa Akkasitti olkaa'i argita.
Dirree Akaakuu Faayilii keessatti dhangii "CSV Barruu" filadhu.
Maqaa galchiitii Olkaa'i cuqaasi.
Qaaqa Alerga faayiloota barruu kan mul'atu irraa, gurmuu arfii fi daangessoota dirree fi barruu deetaa alergamuuf filadhu, TOLE dhaan mirkaneessi.
Yoo barbaachise, erga olkeessee booda, bu'aalee shallagaman gabatee keessatti ammas arguuf sanduuqa filannoo Foormulaawwan qulqulleessi.
Title is: Faayiloota Barruu Alaaguu fi Alerguu